कोरोना भाइरस किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकोरोना भाइरस किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ?
कोरोना भाइरस किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ?
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार ०४:१० प्रकाशित
काठमाडौं : उपचारपछि निको भएकाले फूलमाला र पुष्पगुच्छासहित अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका ३ पुरुषमा पुनः कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ। संक्रमितमध्ये हालसम्म २२ जना डिस्चार्ज भएका थिए।
किन हुन्छ, पुनः पोजेटिभ ?
डिस्चार्ज भएको तीन दिनपछि पुनः रगतको जाँच गरिएको डा. उपाध्यायले बताए। ‘जाँचका लागि रगत र थ्रोट स्वाबको नमुना लिएका थियौं,’ उनले भने।स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा पठाइएको थियो। स्वाब रिपोर्ट दुई जनाको पोजेटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा राखिएको छ। नेपालमा मात्र नभई चीन, जापान, कोरियालगायत मुलुकमा पुनः भाइरस पोजेटिभ देखिएको डा. उपाध्यायले बताए।
डिस्चार्ज हुने क्रममा चिकित्सकले केही साता आइसोलेट भएर क्वारेन्टाइनमा सुझाव दिएका थिए। ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा हेलचेक्र्याइँ भएर अरूबाट पुनः संक्रमण भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने।
निको भएको भन्दै फूलमाला लगाएर डिस्चार्ज गरिएकामा पुनः भर्ना गर्दा तनाव भएको संक्रमितका एक नातेदारले बताए। नेपालमा ९९ जनामा संक्रमण भएको छ। जसमध्ये ७४ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्।